Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 3) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-01 mpandimby ny Magazine > Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 3)
Fa matoky aho fa izao andro fijaliana izao dia tsy mitombina amin'ny voninahitra haseho amintsika. [...] Ny famoronana dia iharan'ny tsy fahamendrehana - tsy misy ny sitrapony, fa amin'ny alalany izay nampanaiky azy - fa manantena; satria ny zavaboary koa dia hafahana amin'ny fanandevozan'ny tsy fahatanterahana mankany amin'ny fahalalahana be voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. [...] Satria voavonjy isika, saingy amin'ny fanantenana. Fa ny fanantenana hita dia tsy fanantenana; satria ahoana no ahafahanao manantena ny zavatra hitanao? Fa rehefa manantena izay tsy hitantsika isika dia miandry azy amin'ny faharetana (Romana 8:18; 20-21; 24-25).
Ry malala, efa zanak’Andriamanitra isika, nefa tsy mbola nambara izay ho toetsika. Fa fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka azy koa isika; fa ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy. Ary izay rehetra manana fanantenana toy izany aminy dia manadio ny tenany tahaka ny fahadiovany (1. Jaona 3:2-3).
Ny hafatra momba ny fanjakan'Andriamanitra dia natiora fanantenany; na eo amin'ny lafiny tenantsika na eo amin'ny lafiny noforon'Andriamanitra iray manontolo. Soa ihany fa hifarana ny fanaintainana, ny fijaliana ary ny horohoro izay iainantsika amin'izao fotoana ratsy izao. Ny ratsy dia tsy hanana ho avy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra (Apôk. 21: 4). Jesosy Kristy mihitsy no mijoro tsy ny teny voalohany ihany fa ny farany koa. Na koa raha miteny colloqual isika hoe: Izy no manana ny teny farany. Ka tsy mila miahiahy momba ny fiafaran'izy rehetra isika. Fantatsika izany. Afaka manorina eo amboniny isika. Hamboarin'Andriamanitra ho marina ny zava-drehetra ary izay rehetra vonona handray am-panetren-tena ilay fanomezana dia hahafantatra izany ary hiaina izany indray andro any. Araka ny voalazantsika dia voafono ny zava-drehetra. Ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia ho avy miaraka amin'i Jesosy Kristy ho Mpamorona, Mpamonjy sy Mpamonjy nitsangana tamin'ny maty. Tanteraka ny tanjon'Andriamanitra tany am-boalohany. Ny voninahiny dia hameno izao tontolo izao amin'ny hazavany, ny fiainany, ny fitiavany ary ny fahatsarany tonga lafatra.
Na izany aza, ny fanantenana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy dia tsy midika fa afaka milaza mialoha ny lalana mankany amin'ny farany azo antoka sy lavorary isika. Ny fomba fiantraikan'Andriamanitra amin'ity faran'izao tontolo izao ity dia tsy azo vinavinaina indrindra. Izany dia satria mihoatra lavitra ny antsika ny fahendren'ny Tsitoha. Raha misafidy ny hanao zavatra noho ny famindram-pony lehibe izy, na inona izany na inona, dia jerena izany rehetra izany amin'ny resaka fotoana sy toerana. Tsy azontsika angamba izany. Andriamanitra tsy afaka nanazava izany tamintsika na dia tiany izany aza. Fa marina ihany koa fa tsy mila fanazavana fanampiny mihoatra ny hita taratra amin'ny teny sy ny asan'i Jesosy Kristy isika. Tsy miova izy omaly, anio ary mandrakizay (Heb. 13: 8).
Na dia tamin'ny fiainan'i Jesosy teto an-tany aza, ny zavatra fanaony sy nolazainy taloha dia tsy nampoizin'ireo nifampiraharaha taminy. Sarotra ho an'ny mpianatra ny nifikitra taminy. Na dia avela hitsara isika amin'ny lasa, ny fanjakan'i Jesosy dia mbola eo an-dàlana, ary noho izany ny famerenantsika azy io dia tsy mamela antsika haminany (ary tsy mila izany isika). Saingy afaka mahazo antoka isika fa Andriamanitra amin'ny maha-izy azy, amin'ny andriamanitra telo izay iray, dia hifanaraka amin'ny toetrany ny fitiavana masina.
Mety tsara ihany koa ny manamarika fa ny ratsy dia tsy azo vinavinaina tanteraka, miovaova endrika ary tsy manaraka fitsipika. Ampahany farafaharatsiny izany no mandrafitra azy. Ary noho izany ny traikefantsika, izay ananantsika amin'izao vanim-potoana eto an-tany izao, izay efa manakaiky ny farany, dia manana toetra mitovy amin'izany, raha ny ratsy dia miavaka amin'ny faharetana. Saingy Andriamanitra dia manohitra ny loza mahatsiravina sy misavoritaka ary mametraka azy eo amin'ny fanompoana azy - toy ny karazana asa an-terivozona. Fa ny Tsitoha dia mamela izay sisa tavela ho fanavotana ihany, satria amin'ny farany amin'ny famoronana lanitra vaovao sy tany vaovao, noho ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izay handresy ny fahafatesana, dia hofehezina amin'ny fanapahana ny zava-drehetra.
Ny fanantenantsika dia mifototra amin'ny toetran'Andriamanitra, amin'ny zavatra tsara izay harahiny, fa tsy amin'ny fahaizana maminavina ny fomba sy ny fotoana hitondrany. Ny fandresen'i Kristy manokana, fanavotana mampanantena, izay manome ho an'izay mino sy manantena ny fanjakan'Andriamanitra ho avy, faharetana, fahari-po sy faharetana, miaraka amin'ny fiadanam-po. Ny famaranana dia tsy mora ny manana, ary tsy eo am-pelatanantsika koa. Izy io dia natokana ho antsika ao amin'i Kristy, ka noho izany dia tsy mila miahiahy isika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao efa antomotra. Eny, malahelo isika indraindray, fa tsy tsy manana fanantenana. Eny, mijaly isika indraindray, fa amin'ny fanantenana matoky fa Ilay Andriamanitra Mahery Indrindra dia hanara-maso ny zava-drehetra ary tsy hamela na inona na inona hitranga izay tsy azo avela tanteraka amin'ny famonjena. Amin'ny ankapobeny, ny fanavotana dia efa azo iainana amin'ny endrika sy ny asan'i Jesosy Kristy. Hofafàna ny ranomaso rehetra (Apôk. 7:17; 21: 4).
Raha mamaky ny Testamenta Vaovao isika ary mifanitsy aminy, ny Testamenta Taloha izay mitarika azy io, dia miharihary fa ny fanjakan'Andriamanitra dia azy, ny fanomezany ary ny zava-bitany - tsy antsika! Niandry tanàna izay manana Andriamanitra mpanorina sy mpanao azy i Abrahama (Heb. 11:10). An'ilay Zanak'Andriamanitra tonga nofo tonga nofo, voalohany indrindra. Jesosy dia mihevitra azy ireo ho fanjakako (Jao. 18:36). Miresaka an'io ho toy ny asany, ny zava-bitany izy. Izy no mitondra izany; mitahiry izany izy. Rehefa miverina izy dia hamita tanteraka ny asany fanavotana. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, raha izy no mpanjaka ary ny asany dia manome ny fanjakana ny votoatiny, ny dikany ary ny tena zava-misy ao aminy! Asan'Andriamanitra ny fanjakana ary fanomezana ho an'ny zanak'olombelona. Amin'ny natiora, ny fanomezana dia azo ekena ihany. Ny mpandray dia tsy afaka mahazo na mamokatra azy. Ka inona no anjarantsika? Na io safidy teny io aza dia toa sahy. Tsy manana anjara amin'ny fanaovana ny fanjakan'Andriamanitra ho tena izy isika. Fa nomena tokoa izany; mandinika ny fanjakany isika, ary, na dia ankehitriny aza, rehefa miaina amin'ny fanantenana ny fahatanterahany isika, dia miaina zavatra iray amin'ny vokatry ny fahefan'i Kristy. Na izany aza, tsy milaza na aiza na aiza ao amin'ny Testamenta Vaovao fa manangana ny fanjakana isika, mamorona azy na mamoaka azy. Mampalahelo fa miha malaza eo amin'ny faritry ny finoana kristiana sasany ny teny toy izany. Diso mampatahotra ny fandikana diso toy izany. Tsy ny fanjakan'Andriamanitra no ataontsika, fa tsy manampy ny Tsitoha hahatsapa tsikelikely ny fanjakany tonga lafatra. Tsy isika no nametraka ny fanantenany na nanatanteraka ny nofiny!
Raha mitaona ny olona hanao zavatra ho an'Andriamanitra ianao amin'ny filazanao aminy fa miankina amintsika izy, dia matetika io karazana antony manosika io aorian'ny fotoana fohy ary matetika dia miteraka fahamaizana na fahadisoam-panantenana. Fa ny lafiny manimba sy mampidi-doza indrindra amin'ny fanehoana an'i Kristy sy ny fanjakany dia ny fanodinana tanteraka ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika. Ny Tsitoha dia hita fa miankina amintsika. Ny fiheverana fa tsy afaka ny ho mahatoky kokoa noho isika izy dia nanako tao anaty haizina. Noho izany dia lasa mpandray anjara lehibe amin'ny fanatanterahana ny idealin'Andriamanitra isika. Avy eo dia manao izay hahatanteraka ny fanjakany izy ary avy eo manampy antsika araka izay tratry ny heriny ary araka izay avelan'ny ezaka ataontsika manokana. Tsy misy fiandrianam-pirenena na fahasoavana marina ho an'Andriamanitra araka ny voalazan'io karajia io. Izy io dia mety hitarika amin'ny asa fahamarinana izay mitaona ny avonavona na mitarika ho amin'ny fahadisoam-panantenana ary na dia ny fandaozana ny finoana kristiana aza.